NASA waxay heshay sawirka ugu horreeya ee godka madow ee galaxyadayada | Shabakadda Saadaasha Hawada
Jarmal Portillo | 16/05/2022 12:00 | Astronomy
Saddex sano ka hor, bulshada sayniska ee Event Horizon Telescope (EHT) ayaa adduunka ka yaabisay sawirkii ugu horreeyay ee god madow oo lagu qabtay galaxyada deriska ah ee M87. Hadda, isla kooxda ayaa markii ugu horeysay muujisay caddayn muuqaal ah oo toos ah oo leh sawirka ugu horreeya ee godka madow ee galaxyadayada, iyadoo la isticmaalayo indho-indheyn laga helay shabakad caalami ah oo telescopes raadiyaha ah.
Maqaalkan waxaan kuu sheegi doonaa sida loo helay sawirka godka madow ee galaxykeena iyo saamaynta uu leeyahay.
1 Ka qaad sawirka godka madow ee galaxykeena
2 caddaynta ugu horraysa
3 Laba godad madow oo isku mid ah
Ka qaad sawirka godka madow ee galaxykeena
Kani waa Sagittarius A*, oo ah isha shucaac aad u doorsooma oo si joogto ah isu beddesha. Saynis yahanadu waxay isticmaalayeen algorithms sanado badan si ay dib ugu dhisaan horumarkiisa waqti ka dib sidii inay tahay "filim", laakiin hadda way ku guulaysteen oo waxay soo bandhigeen muuqaalkoodii.
Marka laga soo tago waraaqo lagu daabacay daabacaad gaar ah oo ah Warqadaha Joornaalka Astrophysical, Kooxda Iskaashatada Horizon Telescope (EHT) ayaa daaha ka rogtay guusha maanta laga gaaray shirar jaraa’id oo caalami ah oo isku mar la qabtay adduunka oo dhan.
"Tani waa sawirka ugu horreeya ee Sagittarius A*, godka madow ee weyn ee bartamaha Jidka Caano, taasoo 4 milyan jeer ka baaxad weyn Qorraxda. Waxaan bixinaa caddaynta muuqaalka tooska ah ee ugu horreysa ee jiritaankooda, "ayay tiri Sara Issaoun, Harvard Astrophysicist A Center Research Fellow, oo ka hadlaysa xarunta dhexe ee Kormeerka Koonfurta Yurub (ESO) ee Munich, Jarmalka.
Natiijadu waxay bixisay caddayn aad u weyn oo ah in shaygu uu ahaa god madow waxayna bixiyeen tilmaamo qiimo leh oo ku saabsan shaqada xiddigahan waaweyn, kuwaas oo loo maleynayo inay jiifaan bartamaha inta badan galaxiyada.
Sida laga soo xigtay in ka badan 300 oo saynisyahano ah oo ka socda xarumaha 80 ee ku lug leh daahfurka, godka weyn ee "miisaanka" qiyaastii 4 milyan oo cadceed, gobol aan ka weyneyn nidaamkayaga qoraxda, 27.000 oo sano oo iftiin ah oo meereheena ah. Markaynu ka eegno, waxay le'eg tahay doollarka dayaxa cirka saaran.
caddaynta ugu horraysa
Sawirku waa muuqaal la wada sugayey oo ku saabsan shayga weyn ee xarunta galaxyadayada. Saynis yahanadu way arkeen xiddiguhu waxay ku wareegaan waxyaabo aad u waaweyn, is haysta, oo aan la arki karin oo ku yaal bartamaha Jidka Caano. Tani waxay si adag u soo jeedinaysaa in jidhka samada ee Sadge A* uu yahay god madow.
Inkasta oo aynaan arki karin godka madow laftiisa sababtoo ah gabi ahaanba waa madow, gaaska dhalaalaya ee ku wareegsan ayaa muujinaya sifo gaar ah: gobolka dhexe ee madow (oo loo yaqaan hooska) oo ku wareegsan qaab dhismeedka giraanta dhalaalaya. Aragtida cusubi waxay qabtaa iftiinka qalloocan ee godka madow ee cufisjiidadkiisa.
"Waxaan la yaabnay in xajmiga giraanta uu u dhigmo saadaasha aragtida guud ee Einstein ee isu-celinta si fiican," ayuu yiri Geoffrey Bower, saynisyahanka madaxa mashruuca EHT ee Machadka Astronomy iyo Astrophysics, Academia Sinica, Taipei. "Indho-indhayntan aan horay loo arag waxay si weyn u wanaajinayaan fahamkayaga waxa ka dhacaya bartamaha galaxykeena iyo bixin fikrado cusub sida godadka waaweyn ee madow ay ula falgalaan deegaankooda«.
U fiirsashada shayga fog waxa ay u baahantahay telescope cabirka dhulku leeyahay, inkastuu si toos ah ama wax u dhigma, taasina waa waxa EHT ku guulaysan karo. Waxay ka kooban tahay siddeed telescopes raadiyaha oo ku yaal Chile, Mareykanka, Mexico, Spain iyo Cirifka Koonfureed. Gudaha USA, oo ay maamusho Kormeerayaasha Koonfurta Yurub (ESO) iyo la-hawlgalayaasha kale ee caalamiga ah ee lamadegaanka Atacama ee Chile, ee Yurub Machadka Millimetric Radio Astronomy (IRAM) ee Sierra Nevada (Granada) ayaa taagan.
EHT waxay u fiirsatay Sagittarius A* dhowr habeen oo isku xigta, xog aruurinaysay saacado, si la mid ah isticmaalka soo-gaadhista dheer ee kamarad fadhida. Waxaa ka mid ah telescope-yada raadiyaha ee ka kooban EHT, anteenada IRAM ee Dhererka 30 mitir ayaa door muhiim ah ka qaatay indha-indheynta, u oggolaanaya in la helo sawirada ugu horreeya.
Iyada oo loo marayo farsamo loo yaqaan interferometry tixraaca aad u dheer (VLBI, oo adeegsata hawlgallada xisaabeed beddelka muraayadaha), calaamadaha dhammaan telescopes raadiyaha ayaa la isku daray oo xogtooda ay habeeyeen algorithms iyo supercomputers si dib loogu dhiso sawirka ugu fiican.
Thalia Traianou, oo ah cilmi-baare ka tirsan Machadka Andalusian Institute of Astrophysics (IAA-CSIC), ayaa ku daray: "Tignoolajiyadu waxay noo ogolaan doontaa inaan helno sawirro cusub oo ah godad madow iyo xitaa filimada."
Laba godad madow oo isku mid ah
Marka la eego sawirka godka madow ee galaxy M87 ee la qaaday 2019, saynisyahannadu waxay isku raaceen in labada dalool ee madow ay aad isugu eg yihiin, in kasta oo godka madow ee galaxykeena. waxay 1000 jeer ka yar tahay kana yar tahay M87*, oo u jirta 55 milyan oo sano. Xidigta aadka u weyn waxa ay leedahay cuf dhan 6.500 bilyan oo qorrax ah, dhexroorkeeduna waa 9.000 bilyan oo kilomitir, taas oo la macno ah in nidaamka qoraxda ilaa Neptune uu galo.
"Waxaan haynaa laba nooc oo galaxies ah oo kala duwan iyo laba qaybood oo aad u kala duwan oo godad madow ah, laakiin meel u dhow cidhifyada godadka madow, waxay u egyihiin si la yaab leh oo isku mid ah," ayuu yiri Sera Markoff, oo ah guddoomiyaha guddiga sayniska ee EHT iyo borofisar ku takhasusay astrophysics-ka aragtida. Jaamacadda Amsterdam. Tani waxay noo sheegaysaa in isku-xidhnaanta guud ay maamusho walxahan si dhow, iyo in khilaafaad kasta oo aan aragno oo fogaano ay sabab u tahay kala duwanaanshaha arrinta ku xeeran godka madow. »
Tani waa sida Roberto Emparan, physicist theoretical iyo borofisar ICREA oo ka tirsan Machadka Cosmology ee Jaamacadda Barcelona, ​​​​uu u sharaxay SMC Spain: "Waqtigan xaadirka ah, waxaan dhihi karnaa isku mid ahaanshaha u dhexeeya sawirka M87 * laga bilaabo 2019 iyo Sawirka hadda jira wuxuu ka yimid SgrA * kaas oo muujinaya, iyadoon loo eegin xajmiga godka madow, deegaanka ugu dhow godka madow waa mid aad u eg. Indho-indhaynta mustaqbalka ayaa wax badan nooga sheegi doona waxyaabaha ku saabsan arrinta ku xeeran godka madow, waxaana laga yaabaa inaan awoodno inaan ogaanno in shaygu uu dhab ahaantii yahay waxa aragtida Einstein saadaalisay, ama 'imposter' ama 'copycat' oo aad u qalaad."
Gonzalo J. Olmo, oo ah borofisar ka tirsan Waaxda Fiisigiska Aragtida iyo IFIC ee Xarunta Isku-dhafka ah ee Jaamacadda Valencia iyo CSIC, iyo Diego Rubiera-García, Cilmi-baaraha Talent ee Waaxda Fiisigiska Aragtida ee Jaamacadda Complutense ee Madrid ayaa isku mid ah. "In kasta oo shaygani uu kun jeer ka weyn yahay walxaha maanta lagu arkay Waddada Caano, haddana waxay la mid tahay daloolkeena 'yar' ee madow wuxuu muujinayaa guud ahaan fiisigiska qeexaya walxahan", waxay ku nuuxnuuxsadeen SMC Spain.
Si kastaba ha ahaatee, natiijooyinka maanta aad ayey uga dhib badan yihiin M87*, inkastoo Sagittarius A* uu ka dhow yahay. Kooxdu waxay ahayd inay horumariyaan qalab cusub oo casri ah si ay u sharxaan dhaqdhaqaaqa gaaska agagaarka Sgr A*. In kasta oo M87* uu yahay muraayad ka fudud oo xasilloon, ku dhawaad ​​dhammaan sawiradu waxay u eg yihiin isku mid, Sgr A * maahan.
"Gaaska u dhow godka madow wuxuu ku socdaa xawaare isku mid ah, ku dhawaad ​​sida ugu dhakhsaha badan ee iftiinka, meel u dhow Sagittarius A * iyo M87 *," ayuu yiri saynisyahan EHT Chi-kwan Chan oo ka tirsan Kormeeraha Steward iyo Waaxda Astronomy iyo Data. Jaamacadda Arizona, halka gaasku uu qaato maalmo ilaa toddobaadyo si uu ugu wareego M87* weyn, Sagittarius A* ka yar wuxuu ku dhammeeyaa wareegga daqiiqado."
"Tani waxay ka dhigan tahay in dhalaalka iyo qaabka gaaska agagaarka Sagittarius A* uu si degdeg ah isu beddelayo iyadoo EHT ay iska kaashadaan inay dhawraan: waxa ay la mid tahay in aad isku daydo in aad sawir cad ka hesho ilmo yar oo si degdeg ah dabadiisa u eryanayoAyuu hadalkiisa sii raaciyay.
Sawirka Sgr A* ee godka madow waa celceliska sawirada kala duwan ee ay kooxdu soo saartay, iyadoo ugu dambayntii muujinaysa xiddigta weyn ee ku taal bartamaha Jidka Caano markii ugu horeysay.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto sawirada la qabtay godka madow ee galaxyadayada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Astronomy » Sawirka godka madow ee galaxyadayada